Mpiraki-teny ho an-tsoratra (notaires) : famindran-dova avokoa ny 40%-n’ny asa | NewsMada
Mpiraki-teny ho an-tsoratra (notaires) : famindran-dova avokoa ny 40%-n’ny asa
Vitsy ny mahalala fa misy tokoa ny Tranoben’ny lalàna etsy amin’ny fitsarana Anosy, ho an’ny mpisolovava, ny mpiraki-teny ho an-tsoratra (notaires) ary ny vadintany (hussiers).
Manaraka fiofanana arak’asa tao amin’ny Tranoben’ny lalàna etsy amin’ny fitsarana Anosy ny mpiraki-teny an-tsoratra mianatra asa 20, ny zoma 10 febroary teo, misalotra ny anarana miara-mihira Itokiana. Nahatanterahana azy ny fiaraha-miasantsika amin’ny firaiketan-teny ho an-tsoratra atsy La Réunion sy ny Oniversiten’i La Réunion, atao intelo isan-taona.
Mifanindran-dalana amin’ity koa ny fiofanana omen’ny mpampianatra vahiny, mandritra ny roa andro ho an’ireo mpiraki-teny ho an-tsoratra ireo, mikasika ny fanambadiana, ny fandovana, ny fahalalahana sy ny zon’ny tsirairay. Marihina fa mikasika fandovana avokoa ny 40%-n’ny asan’ny mpiraki-teny ho an-tsoratra.
Tsy mahafantatra ny lalàna
Fantatra fa tena mahatonga ny disadisa sy fifanolanana eto Madagasikara ny famindran-dova noho ny fahafatesana, ny tsy fahalalana ny fisian’ny fifanarahana raiketin’ny fanambadiana, ny fananan’ny mpivady, sns. Mateti-pitranga koa ny fisolokiana ataon’ny havana, na olon-kafa amin’ny fananana, tany, trano, sns, amin’ny fampiasana taratasy, tombokase hosoka, sns.
Nosafidina manokana ireo lohahevitra ireo satria maro ny vahiny manambady teratany malagasy, ka ilain’ny mpiraki-teny ho an-tsoratra fehezina tsara ny rafitra sy ny lalàna mifehy ny tsirairay. Eo koa ny fahalalahana sy ny fandovana, toy ny fanatanterahana ny “tenin’ny maty” amin’ilay antsoina hoe “masi-mandidy”.
Sary : Fanou R.